ရှေးမြန်မာ..: ယေဓမ္မာ ဟေတုပ္ပ ဘဝါ
yes, feel free to use anything you like from my photographs. I took that one because the Buddha's legs were down in front of him. Most unusual. all the best, Chris
လေးကြောင်းစာပါ မြေပုံဘုရာ တစ်ဆူကို ခရစ် (Chris ) စုဆောင်းထားတဲ့ Flicker Site မှာအမှတ်မထင်တွေ့ပါတယ်။ ဗစ်တိုးရီးယား နဲ့ အယ်ဘာတ် ပြတိုက်၊ကို အလည်ပတ်ရောက်စဉ် ထူးထူးခြားခြား (ခြေနှစ်ဘက်ချဟန် )ဖြစ်လို့ ရိုက်ယူခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အများလေ့လာဖို့ရာ ယူသုံးခွင့်ပြုပါလို့ ခွင့်တောင်းတဲ့အခါ အထက်ပါစာအတိုင်း နှစ်သက်ဖွယ် အကြောင်းပြန် ခွင့်ပြုပါတယ်။ အရွယ်အစား နဲ့ အချက်လက်အပြည့်အစုံရဖို့ ပြတိုက်ကို လှမ်းမေးရပါဦးမယ်။
ပုဂံခေတ်မြေပုံဘုရားသမိုင်းရေးထားတဲ့ စာများများမရှိသေးပါ။ သိသလောက်ပြောရရင် ကျောက်စာဝန်ဟောင်း ဦးမြကနှစ်အုပ်တွဲရေးပါတယ်။ ဒီစာအုပ် ရှာမရသေးပါ။
ဒေါက်တာသန်းထွန်းက မြန်မာ့မြေထယ်ပစ္စည်းများစာတမ်းမှာ တခြားမြေထည်နှင့်အတူ ရေးထားတာဖတ်၊မှတ်လေ့လာရပါတယ်။ ပုံမပါဘဲ စာတွေချည်း မှတ်ရတဲ့အခါ စိတ်ထဲအားရကျေနပ်မှု မရှိဘူးလို့ စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းဆိုချင်ပါတယ်။
မြန်မာဘာသာရေး သမိုင်းသုတေသန ဆိုင်ရာ စာတမ်း၊ စာအုပ်တွေရဲ့ အားနည်းချက်က ပုံမပါတာပါဘဲ။ ဘယ်နှစ်ခုနှစ်၊ ဘယ်နားမှာ တူးဖော်ရရှိတဲ့ ရှေးပစ္စည်းမှာ
ဘယ်လို လေ့လာတွေ့ ရှိပါတယ် ဆိုပြီး စာတွေအများကြီးရေးထားသော်လည်းဘဲ ပုံမပါ။
စာပြသမိုင်း ဆိုတာထက် ပုံပြသမိုင်းကသာ လူတွေကို ပိုစိတ်ဝင်စားစေနိုင်လိမ့်မယ်၊ လေ့လာလိုသူတွေ အတွက် အကျိုးများမယ်လို့ ယုံကြည်မိပါရဲ့။
ခုတော့ ဒေါက်တာသန်းထွန်းရေးထားတဲ့ စာကို ဖြည့်စွတ်ရေးသားဖို့ ဆိုတာအသာထားလို့ သူရေးထားတဲ့ စာတမ်းထဲက စာတွေကို အမှန်တကယ် ပစ္စည်းတွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးဖို့ရာ အချိန်အများကြီးပေးပြီး စုဆောင်း ရှာဖွေရပါဦးမယ်။
မြေပုံဘုရားတွေကို ပျူခေတ် ခန့်မှန်း ၅ ရာစု လို့ပညာရှင်အများစုက ဆိုပါတယ်။
မြေပုံဘုရားတွေမှာ ဘယ်အချိန်မှာစပြီး စာရေးလဲဆိုရင် အနိရုဒ္ဓ ( အနော်ရထာ ) မင်းဘွဲ့ပါစာ မြေပုံဘုရားအများအပြားတွေ့ရပြီမို့ ၁၁ ရာစုဦးပိုင်း ပုဂံ၊ လို့အသေအချာပြောနိုင်ပါတယ်။
မြေပုံဘုရား အတော်များများမှာ " စာ " ပါတဲ့အတွက် ခေတ်ပြိုင်အထောက်အထားအဖြစ် လေ့လာလို့ရပါတယ်။ ပုဂံခေတ်မြေပုံ ဘုရားလို့ဆိုတဲ့အခါ အလှူရှင်တွေဟာ အုပ်ချုပ်သူ မင်း၊ မိဘုရား၊ အမတ်၊ ရဟန်း ၊ ရသေ့ ၊ အမှု့ထမ်း ကနေ သာမန်အရပ်သူ၊ အရပ်သားတွေအထိပါတယ်။
အလှူရှင်နာမည်၊ အလှူပစ္စည်း ဒါမှမဟုတ် ဆုတောင်းစာတွေကို ၊ မြေပုံဘုရား နောက်ကျောဘက် ဒါမှမဟုတ် အောက်ခြေဘက်ပိုင်းမှာ ရေးထိုးထားလေ့ရှိပါတယ်။
ဆေးဘက်ဝင် သစ်သီး၊ သစ်ပင်၊ နာမည်တွေရေးထာတဲ့ မြေပုံဘုရားတွေလည်းရှိပါတယ်။
စာတွေကို နာဂရီ ၊ သက္ကတ၊ မွန်၊ ပါဠိ ဘာသာနဲ့ ရေးတယ်။
အခုမြင်နေရတဲ့ မြေပုံဘုရား အောက်ခြေမှာ စာလေးကြောင်းရေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ စာတော်များများက ဖတ်မရအောင် ပျက် နေပါပြီ။
မြေပုံဘုရားအောက်ခြေမှာ ရေးထားတာရယ်၊ လေးကြောင်းစာဖြစ်နေတာရယ် ကြောင့် " ယေဓမ္မာ" ဂါထာဖြစ်မယ်လို့ ကောက်ချက်ချလိုပါတယ်။
ယေဓမ္မာ = အကြောင်းခန္ဓာငါးပါး တေဘူမကဝဋ်တရားတို့သည်
ဟေတုပ္ပ ဘဝါ = အကြောင်းဖြစ်သော သမုဒယ သစ္စာသာလျှင် အမွန်အစရှိ ကုန်၏
တေသံ = တေသံ ဓမ္မာနံ ထိုခန္ဓာငါးပါး အစရှိသော တရားတို့၏
ဟေတုံ = အကြောင်းဖြစ်သော သမုဒယတရားကိုလည်း
တထာ ဂတော = မြတ်စွာဘုရားသည်
တေ(တေသံ) = တေသံ ဓမ္မာနံ ထိုအကြောင်းဖြစ်သော သမုဒယသစ္စာတရားတို့၏ ယောနိရောဓေါ အပြင်ချုပ်ငြိမ်းရာ ဖြစ်သော နိရောဓသစ္စာသည် အတ္ထိ ရှိ၏
သဉ္စ (တဉ္စ) = ထိုနိရောဓသစ္စာကိုလည်း တထာဂတော မြတ်စွာဘုရားသည် အာဟ ဟောတော်မူ၏
မဟာသမဏော = ရဟန်းကြီးဖြစ်သော ဘုရားရှင်သည်။
ဧဝံဝါဒီ = ဤသို့သော အယူရှိတော်မူ၏။